Kalfadhigii 13aad ee golaha deegaanka degmada Garowe oo maanta furmay – Radio Daljir
Kalfadhigii 13aad ee golaha deegaanka degmada Garowe oo maanta furmay
Seteembar 1, 2012 9:15 b 0
Garowe,? Sept, 01 – Waxaa maanta hoolka shirarka dowladdahoose ee degmada Garowe ka furmay kalfadhigii 13-aad ee golaha deegaanka degmada Garowe,? kaasi oo ay soo xaadireen inta badan mudanayaasha golaha deegaanka Garowe iyo mas’uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Nugaal.
Kalfadhigaan oo sanadkiiba labo jeer ay qaataan xubnaha golaha deegaanka Garowe ayaa maanta waxaa lagu soo bandhigayay waxqababadka degmada Garowe 6-dii bilood ee lasoo dhaafay,? iyo tilaabooyin kale oo? haatan umeelaysan maamulka degmada Garowe.
Guddoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Garowe C/Casiis Nuur Cilmi ‘Koor’ ayaa xubnaha golaha deegaanka iyo mas’uuliyiinta kale usoo bandhigey warbixin dheer oo uu kaga hadlayay tillaabooyinkii hormarineed ee laga qabtay degmada,? Iyadoo uu tusaale usoo qaatay kor uqaadidda bilicda, furitaanka iyo dayactirka jidadka cusub, arrimaha nadaafada, iyo illaalinta amniga caasumada.
Mudane Koor,? waxaa uu kalfadhigaan ku sheegay in wax la isaga weydiin doono xeerar kasoo baxay kalfadhigii 28-aad ee barlamaanka Puntland, kaasi? oo ay kamid ahaayeen? xeerkii doorashada golayaasha deegaanka dowladaha hooose,? xilliga loo gudbayo nidaamka geeddi socodka axsaabta badan,? iyo xeerkii siyaasadda hilibka iyo jaandgoynta canshuuraha dowladaha hoose.
Gadoomiyaha gobolka Nugaal C/Xisri Cali ‘Qarjab oo soo xiray fadhigii maanta ayaa si weyn u amaanay waxqabadka maamulka degmada? 6-dii bilood ee lasoo dhaafey. Waxaana uu sheegay in haatan lawado qorshayaal kale oo kor loogu qaadayo ammaanka magaalada Garowe.
Kalfadhiga 13-aad ee golaha deegaanka Garowe mudada uu socda waxaa maaamulka degmada Garowe uu? ku meelayn doonaan xeerar uga qorsheynaa arrimaha horumarinta degmada iyo ansixinta miisaaniyada 2013, waxaaana uu kuusoo beegmayaa xilli magaalada Garowe ay ka socdaan howgallo kor? loogu qaadayo bilicda magaalada Garowe.
C/wali Maxamed Shiikh
Radio Daljir Garowe.
Baarlamaanka Puntland oo la iskugu yeeray kulan aan caadi ahayn.
Hay?adda UNECO oo walaac ka muujisay xaaladda warfidiyeennada Soomaaliyeed.